को हुन् दामोदर भण्डारी? – SidhaRekha
को हुन् दामोदर भण्डारी?
२०७४ कार्तिक ७, मंगलवार ०९:३९ October 24, 2017
२८ वर्षदेखि सक्रिय राजनीति गर्दै आएका दामोदर भण्डारीको जन्म २०३० साल कार्तिक २० गते बैतडीको पाटन नगरपालिका ६ डोबरामा भएको हो ।
उहाँको बुबाको नाम उदयसिंह भण्डारी र आमाको नाम कमला भण्डारी हो । बैतडी जिल्ला पाटनको श्री कृष्ण उच्च माध्यमिक विद्यालय (तत्कालीन श्री कृष्ण मा वि) बाट पढाइ सुरु गरेका भण्डारीले पाटन बहुमुखी क्याम्पसबाट कानुन बिषयमा प्रविणता प्रमाण पत्र तहको अध्ययन गर्नुभयो भने भारतको कुमाउ बिश्वबिद्यालयबाट मानविकी संकायमा स्नातक गर्नुभएको छ । कविता भण्डारीसंग बिबाह गरेका भण्डारीका एक छोरी र दुई छोरा छन् ।
साधारण परिवारमा जन्मेका भण्डारी २०४६ सालदेखि राजनीतिमा लाग्नुभएको हो । २०४६ सालको जनआन्दोनलका समयमा उहाँ तत्कालिन नेकपा मालेको भातृ संगठन अनेरास्वबियू (पाँचौं) मा संगठित हुनुभएको थियो । उहाँ २०५० सालमा अनेरास्ववियू, बैतडीको अध्यक्ष हुनुभयो ।
२०५१ सालमा नेकपा एमालेका जिल्ला कमिटी सदस्य भएका भण्डारीले तीन पटक नेकपा एमाले बैतडी जिल्लाको नेतृत्व सम्हाली सक्नु भएको छ ।
२०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पाटन ९ को वडा सदस्यमा निर्वाचित भण्डारी २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा बैतडी क्षेत्र नम्वर १ बाट उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो । यस क्षेत्रबाट एकीकृत नेकपा (माओवादी) का उम्मेद्वार नरेन्द्रबहादुर कुँवर बिजयी हुनुभएको थियो । पराजित भएपनि राजनीतिमा उहाँले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आउनुभयो ।
त्यसपछी बि. स. २०७० सालमा भएको संबिधानसभाको निर्बाचनमा बैतडी क्षेत्र नं १ बाट ११ हजार ६ सय ७१ मत प्राप्त गरि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार लोकराज अवस्थीलाई पराजित गर्दै बिजयी हुनुभयो । २०७३ सालमा केपी ओलीको सरकारमा अर्थराज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका भण्डारी बैतडी जिल्लामा अहिले बामगठबंधनबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बन्नु भएको छ ।
यसअघि अर्थराज्यमन्त्री भैसक्नुभएका भण्डारी हाल एमालेको प्रदेस नं ७ कमिटि सदस्य हुनुहुन्छ । सदैव चर्चाको केन्द्रमा रहँदै आउनुभएका भण्डारी प्रष्ट बोल्ने र अडान राख्ने नेताको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । विद्यार्थी छँदादेखि नै भण्डारी मीठो र प्रष्ट ढंगले बोल्नुहुन्थ्यो । विपक्षी नेताहरुले समेत उहाँलाई प्रष्ट र वैचारिक अडान भएका नेताका रुपमा मान्छन् ।
अघिल्लोसोनी टिभीको चर्चित कार्यक्रम ‘कौन बनेगा करोडपति’ बन्द हुँदै
पछिल्लोकर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले चुनावमा भोट हाल्न नपाउने